250W 500W Mvura isina mvura IP65 DMX RGB kana yakasimba LWW-10 Dhizha rekushisa washer,Led Wall Washer Light,Led High Bay,Led Work Light - China 250W 500W Mvura isina mvura IP65 DMX RGB kana yakasimba LWW-10 Dhizha rekushisa washer, Manufacturer & Supplier
250W 500W Mvura isina mvura IP65 DMX RGB kana yakasimba LWW-10 Dhizha rekushisa washer. WASHINGTON WEDZI YENYU KUVARA. Chinhu chitsva chinonakidza paFestive Lights neicho chaicho chinokonzerwa neWorld Wall Washer mutsva, kuumba munyoro munyoro, kupa runyararo mamiriro ekudzivirira. Inogonawo kushandiswa pane imwe nzvimbo yakanyanya kuderera kuti iite zvinoshamisa, kunyanya apo yakawanda inoshandiswa pamwe chete kana kuvhara nzvimbo huru dzine simba rakaoma. Mavhenekisi Edu EmaRovheni Emaodzanyemba anonyanya kushandiswa pakushongedza uye kusimbisa chivako kana bindu. Nzira yedu inosanganisira mavara ekushandura mahedheni anogadzira mavara-mizhinji, akadai sokupenya, kupera kana kumira. Inogona kushanda mumagariro ekuzvimirira uye DMX mode, iyo inogona kuita mhando dzakasiyana-siyana dzekuchinja, zvakadai sokupenya, kupera, kuwedzera, maruva manomwe kuruka synchronously. DMX 256 grey gray degree dimmer, DMX inogadziriswa (zviuru zvemigumisiro inowanikwa kana magetsi akawanda akabatana pamwe chete) .Chiedza chekutonga mamiriro: Independent mode / Master / Slave mode / DMX / RGB kana Steady( 250W 500W Mvura isina mvura IP65 DMX RGB kana yakasimba LWW-10 Dhizha rekushisa washer )
250W 500W Mvura isina mvura IP65 DMX RGB kana yakasimba LWW-10 Dhizha rekushisa washer
©2005-2018 Karnar Taura nesu Site map Last modified: November 15 2019 04:01:08.